Faa'iidooyinka:hawo aad u wanaagsan; shaandhayn kara gaasaska sunta ah; Awood u yeelo kuleylka; Biyo u nuugo karaa; Biyuhu biyuhu ma noqon karaan; Dabacsanaan; Aan kala go ’lahayn; Dareen aad iyo aad u fiican oo aad u jilicsan; Marka la barbar dhigo maaskaro kale, qaabka dhejiska ayaa fudud; Si dabacsan, waa la yareyn karaa ka dib markaad fidiso; Qiimo jaban, oo ku habboon waxsoosaarka baaxada leh.
Xidhmada mashiinka daboolida mashiinka mashiinka ee KN95
Guntin sanka ka samaysan oo balaastiig ah, ku habboon dhammaan noocyada wajiga.
Labalaab xirmo xirmo adag u xir, si wax ku ool ah u goo hawada labada dhinac.
Lakabka go'doominka ah, Xannibaadda hufan ee daweynta Angle.
Tuuri gacmo gashiga aan-nadiifin ee budada ah
Ma jiro daweyn budo ah oo lagu yareeyo xasaasiyadaha
Waxay ka fogaan kartaa suurtagalnimada faddaraynta taabashada oo ay keento galoofyada budada waxayna si weyn u yareynaysaa jiritaanka xasaasiyad
Dusha sare ee galoofyada ayaa waxoogaa lagu calaamadeeyay si loo kordhiyo kala-baxa
Galoofyada waxaa loo sameeyaa si sax ah oo ha daadin
1. 75% alkolo nadiifiye nadiifiye nadiifiye wuxuu si wax ku ool ah u laayaa in kabadan 99.99%, gacanta ha dhaawacmin
2. Si wax ku ool ah oo dhaqso leh
3. Qunyar socod iyo xanaaq la'aan, ma dhaawacayso maqaarka
Ha ku maydhin biyo, si fudud biyo loo badbaadiyo
4. Cillada gel, si fudud ayaad u xakameyn kartaa qadarka. Cabbir yar, fududahay in la qaado
Qalabka wax lagu duubo ee Kn95 iyo N95 waxay leeyihiin isku ilaalin isku mid ah, laakiin kaliya waxay raacaan heerarka imtixaanka ee dalal kala duwan. Maaskarooyinka Kn95 waxay raacaan heerarka Shiinaha iyo N95 waji-xidhka waxay raacaan heerarka Mareykanka. Awooda ilaalintooda ee walxaha aan saliida ahayn (walxaha chloride-ka loo yaqaan 'sodium chloride for test') kama yara in ka yar 95%.
Dharka la iska tuuri karo ee dharka lagu daadiyo waxaa loola jeedaa qodobbada ilaalinta ee la tuuri karo oo ay xiraan shaqaalaha kiliinikada markay la xiriiraan fasalka A ama bukaanka cudurrada faafa ee hoos yimaada maaraynta cudurada faafa ee heerka A.
Dharka dhalaalaya waa shayga ugu weyn ee maaskarada. Maaddada ugu weyn ee dharka dhalaalaysa waa polypropylene.
Sida magaca macnaheedu yahay, waa xarig caag ah oo dhuuban oo loo adeegsado maaskaro si loo xaliyo maaskaro ku yaal buundada sanka.
Sidaa daraadeed, buundada sanka waxaa sidoo kale loo yaqaan buundada balaastiga oo sanka ka buuxdo - feeraha sanka - buundada sanka.
Shaqada haweenta hawada waa astaamaha maaskaro maaskaro.
Jawiga shaqada kulul iyo qoyaanka leh hawo yaraanta ama mugga shaqaalaha, isticmaalka maaskaro-haweedka ka hortagga gulukooska neefsashada ayaa kaa caawin kara inaad dareento raaxo marka aad daasho.